Ukugcinwa simila we udebe lwangezansi: izimbangela, ukwelashwa
Ngezinye izikhathi ku izicubu ezithambile we ngalo ingaphakathi ngomlomo kungenziwa imikiswe ukubona kumiswa usayizi encane. Phakathi anomalies ka lwamafinyila nokugcinwa simila we udebe lwangezansi yisona esikhulunywa abantu abaningi. Kujwayele livela njengendlela "ibhola" efinyelela kancane. Naphezu isimo ingozi ka nginesimila enjalo kungaletha ukungakhululeki eside.
Ukugcinwa simila we udebe lwangezansi kuyinto zokugula ezivamile le mucosa ngomlomo. Kuyinto neoplasm ingozi yemvelo ngendlela ibhola. Pathology ngokuvamile kwenzeka ngenxa ukuvaleka ukugeleza encane nezindlala salivary. Isizathu salokhu kungenzeka ukulimala ezivamile noma ukuvuvukala.
A simila kuvamile ngokulinganayo kwabesifazane nabesilisa. ukubukeka kwakhe akuxhomekile ubudala. A simila yikhono ezahlukene ukwandisa ngokushesha ubukhulu, esithinta ngendlela zokuphila zansuku zonke. Yingakho odokotela batusa ukuyisusa.
Ziyini izimbangela eziyinhloko zalokhu of izinhlumba
Neoplasm ngokuvamile kwakheka ngenxa yokulimala mechanical umonakalo nomlomo. Lezi zihlanganisa ukusha, uthuthumele futhi okuhlabayo. Ngenxa yalokho, unomphela ukulimala indlala imbobo excretory ivimbekile, imfihlo iqala ukulibala, walibumba is a sokwelusa umhlambi omncane. Kancane kancane, ligcwele liquid inyuka ngosayizi.
Ukuvuvukala ngemva ukulimala kungase futhi kuholele ekutheni egunjini lokuhlolwa kwezifo. Ukugcinwa simila we udebe lwangezansi kungenzeka umuntu nganoma isiphi yobudala. ngokuvamile Neoplasm is phetho azalwa naso lwegciwane izingxenye okubizwa ngokuthi amaseli yezindlala.
Ngaphezu kwalokho umthelela kuhlasimulise kungadala izinhlumba ukukhonza yoma Amapayipi excretory. Ngokuvamile, kwephula kubangelwa isimila ukuthi licindezele ngqo uvule imbobo, noma sesibazi. Kugcine unciphise isiteshi, futhi imfihlo abelokhu evalelekile is kancane kancane kwanda inani yezindlala.
Kanjani ukuqaphela zokugula?
Ukugcinwa simila we udebe lwangezansi kuyinto capsule sezicubu zezinzwa nge okuqukethwe viscous ngaphakathi. Ngaphandle, kufana ibhola elincane. Ezemfundo kobuhlungu, kodwa kungabangela ukungakhululeki ngenkathi ukhuluma noma ukudla. Simila othambekele ukukhula ngokushesha kanye lingafika ku 2 cm ububanzi. Ulwelwesi lwamafinyila phezu kujwayele ukuthi kungabi khona nezinguquko eziphawulekayo. Ngezinye izikhathi eba umthunzi cyanotic, ngenxa ekuqongeleleni okuqukethwe.
Ball ukumboza ezicutshini, futhi ngaphakathi kuwo kukhona ketshezi efana ngamathe. On palpation kumiswa esithambile. Lapho udla capsule zilinyazwa kalula, ngenxa ukuthi yikuphi okuqukethwe zayo zangaphakathi kuthululiwe, kodwa waphinda egcwele simila. Njengomthetho, ukwakheka siqukethe egumbini elilodwa, kodwa kukhona amacala izinhlumba multi.
Bona nokugcinwa izinhlumba for onguchwepheshe oqeqeshiwe akunzima. Lapho umunwe icindezelwa imfundo ubalekela, kodwa ngemva kwesikhashana kuyabuya. Okuningi ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe zingenziwa emva ultrasound. Ngesikhathi inqubo, udokotela Kuhlola simila sika isakhiwo, usayizi kanye nokuqukethwe. Ngu Bebona iziteshi ukugeleza kunqunywa ububanzi khona itshe salivary. Kwaze kwaba yilapho sebeshiye ucwaningo Uchwepheshe umnyuziki ingagunyaza ukwelashwa nokugcinwa izinhlumba we udebe lwangezansi.
Isidingo ukuxilongwa umehluko
Ukuze ukuxilonga ngokunembile futhi kamuva ukhethe impatho abanekhono, kubalulekile ukwazi ukuthi zibone leli zokugula phakathi kwezinye neoplasms imvelo kungavamile ukuba ingozi. Lezi zinhlobo ezilandelayo izinhlumba we ndlala salivary:
ezincane salivary nezindlala.
Ranuli yenziwe yaba yasendaweni phezu imisipha sublingual-emhlathini. Akwaziwa amacala kokuziphatha esifundeni submandibular. Lokhu kumiswa likhulu. Kungaba nokususa amatomu ulimi, ngaleyo ndlela ukuvimba umuntu ngokugcwele ukudla nokuziphatha izingxoxo.
Simila we ndlala submandibular libhekene nokuthuthukiswa kancane. Phakathi palpation kalula ukuthola imfundo oyindilinga. Uma lokhu simila sikhula, lisibekele esifundeni engenhla ngalo ingaphakathi ngomlomo. Esimweni esinjalo ngokuvamile yathi bulging imfundo hyoid ingxenye.
Pathology we ndlala parotid kuyinto ngempela ezingavamile. Esinye sezizathu esiyinhloko lasungulwa zihlanganisa ukulimala mechanical, ukuvuvukala ukuvaleka mapayipi. Lawa izici ezifanayo avuse kumiswa nezinye anomalies emlonyeni ngokuthi nokugcinwa simila we udebe lwangezansi (izithombe okwethulwa kulesi sihloko). Ukuthuthukiswa zokugula lapho besanda kuqala akuyona ephelezelwa izimpawu evelele.
Ngenxa yalokho, kungenzeka umonakalo mechanical kwakhiwa ngakho ngokuthi simila extravasal. Lokhu kumiswa ungachazwa esakha granulation izicubu nxazonke.
Yini ukwelashwa iyadingeka?
Ukwelashwa kwalesi sifo kuye kwaba wamazinyo. Ngemva kokuqinisekisa uphethwe kwezinto ezimbili ukuxazulula le nkinga. Lo chwepheshe ungathumela ekhaya nesineke, bekholelwa ukuthi imfundo oyoxazulula bebodwa. Inketho sesibili kuhilela ukususwa udebe lwangezansi we izinhlumba nokugcinwa surgically.
Ukusebenza ihlala cishe imizuzu engu-30 futhi kuhilela ukusetshenziswa izinzwa wendawo. umsizi udokotela uphendulela lip wakhe engezansi, bese ubamba kulo nilondekile. Udokotela wamazinyo kwenza sebeziqhumbuza ezimbalwa kanye kumiswa, khulula simila kusuka kokuqukethwe layo langaphakathi kanye yaseZimbabwe. Ngokusho iziguli eziningi, ukusebenza ngokwayo ngaphansi kokuqondisa udokotela ohlinzayo abanolwazi sihamba cishe kobuhlungu. Inkathazo main iqala ngesikhathi nokuvuselelwa, uma kancane kancane iqala okuphulukisa nokugcinwa simila we udebe lwangezansi.
Ukusebenza kungaba kwenziwe usebenzisa laser. Nokho, asebenzise usizo lwakhe akuvamile ngenxa ukopha ezinzima futhi ingozi okusezingeni eliphezulu wendlala ulwelwesi perforation.
Isikhathi nasezinkingeni ezilandela ngemva kokuhlinzwa
Ngemva kokuhlinzwa, iziguli belulekwa ukusingatha endaweni ethintekile nsuku isixazululo ekhethekile isinqandakuvunda futhi ukuqapha isimo sabo. Abanye bathi kufanele zibe ngosuku lokuqala ngemuva kokuhlinzwa siyisinqumo esinzima kunazo zonke. Khuluma udle - zonke lezi zenzo elula ibakhathaze kubuhlungu, kodwa ngemva cishe inyanga yonke into sesibuyele kokujwayelekile.
Kufanele kuqashelwe ukuthi kuphele isikhathi nokuvuselelwa incike ubukhulu nokwakheka kwamanye ingaphazamiseki. Iziguli eziningi bathi mayelana ezibukwayo ukuhlanekezela izindebe futhi kuba ndikindiki okuncane ngisho izinyanga emva kokuhlinzwa. Ukuze ugweme imiphumela engemihle, kutuswa ukususa zokugula at esigabeni sokuqala lasungulwa.
Ukugcinwa simila we udebe lwangezansi: ekwelapheni amakhambi abantu
Iziguli eziningi okwadingeka asebenzelane nale nkinga, ukwesaba ukuhlinzwa. Yingakho bakhetha izixazululo ehlukile ukuze silwe nale nkinga. Eziningi zikholelwa ukuthi ekwelapheni izimila kufanele kwenziwe imithi yolunye uhlobo. Abelaphi ukunciphisa simila ngobukhulu ukuphakamisa ukusetshenziswa amagajethi ahlukahlukene nge decoction yamakhambi.
Indlela ephumelela kakhulu saziwa kulokhu ijusi Kalanchoe. Isitshalo okufanele ezokuhlafunwa kahle futhi ushiye isikhashana emlonyeni, ukuthi juice kwaba phezu simila. Ngendlela efanayo esetshenziswa Aloe. Lesi simila umise ngokwaso njengoba indawo enhle kakhulu eqeda ukuvuvukala kanye amanxeba ejenti.
Ungakwazi ukupheka omunye isixazululo kwezokwelapha. Kufanele libe 70 g likagologo exutshwe 10 g we komkhiwane juice. Isixazululo kwaphumela kufanele bafake imbala izinsuku ezintathu. Khona-ke, ingxube kufanele buhlanjululwe ngamanzi e isilinganiso 1: 3. A pad ukotini ofakwe kulesi isixazululo kanye zisebenze endaweni ethintekile cishe imizuzu engu-10.
Umbuzo noma ngabe ukwelashwa siyasebenza, namanje uvuliwe. Yiqiniso, ngaphambi kokuba iphendukele usizo ukwelashwa kwabantu, kufanele uxhumane nodokotela wakho. Isikhathi esining impela kwenzeka ukuthi emva kokwelashwa lotions uyabekezela namanje emuva ehhovisi likadokotela wamazinyo, lapho kwakudingeka nginesimila isuswe surgically. Safe ukusho into eyodwa kuphela: elikhulu ubukhulu yesimila, isikhathi esingaphansi isiguli ukuba izame nempilo yabo engozini.
Kulesi sihloko, satshelwa ukuthi nginesimila nokugcinwa udebe lwangezansi. Umlando lesi sifo iziguli eziningi kuholela becabanga ngale ndlela ukuze le nkinga. Abantu abaningi bamshaya indiva lesi zokugula, edonsa emuva isikhathi ngasinye ukuba aye kudokotela. Empeleni, lokhu ukunganakwa impilo yabo ingase zibulale inkambo isifo. I emikhulu ubukhulu simila, kwakuya kuba nzima is lisuswe futhi kungabi nemiphumela emibi. Yingakho uma inkomba eyinhloko ukuthi ukwakheka neoplasm udebe kufanele afune usizo lodokotela. Hlala uphilile!
Warts endaweni obuseduze. Ukususa warts
Ukwelashwa herpes zangasese.
Izimpawu dysbiosis emathunjini kwabesifazane kubangela lesi sifo, ukwelashwa
Wesibeletho-thoracic osteochondrosis: izimpawu nezidakamizwa ukwelashwa
Kungani kukhona kokubili izinga lokushisa nokuhlanza ezinganeni?
Novokuznetsk Museum of Local Lore: ikheli, izithombe
David Ricardo - Economist abadumile
Drama Theatre (Smolensk): repertoire, ukubuyekezwa, qembu
Lymph Massage: Izinzuzo kanye contraindications
Recipe cutlets yengulube kanye yenkomo. Burgers zakudala: isinyathelo ngesinyathelo iresiphi
Ihhotela Seasing Boutique Hotel 3 * (Vietnam / Nha Trang): ngezibuyekezo nezithombe zezivakashi